The Ab Presents Nepal » नायिका सुष्मा अधिकारीले म्युजिक भिडियोमा बोल्ड अवतार चल्न छोडेर कि कथाले मागेर ? आफ्नो बिचार राख्नु होस्
नायिका सुष्मा अधिकारीले म्युजिक भिडियोमा बोल्ड अवतार चल्न छोडेर कि कथाले मागेर ? आफ्नो बिचार राख्नु होस्
काठमाण्डौँ -: नायिका सुष्मा अधिकारीले एक म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको बोल्ड विकीनी अवतार सार्वजनिक भएको छ । लै बरी लै बोलको म्युजिक भिडियोको सुटिङका क्रममा खिचिएको नायिका अधिकारीको बोल्ड विकीनी सार्वजनिक भएको हो ।
सपन श्रेष्ठको स्वरमा रहेको सो म्युजिक भिडियो चाँडै नै सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको छ । सो भिडियोमा उनी निकै बोल्ड देखिएकी छिन् । आकर्षक अनुहार ,लोभलाग्दो शारिरिक बनावट भएकी नायिका अधिकारी कैलालीको धनगढीमा जन्म भई हाल काठमाण्डौँको बालुवाटारमा बस्दै नेपाली रंगमञ्चमा क्रियाशिल रहेकी छिन् ।
नायिका अधिकारी म्युजिक भिडियो ,बिज्ञापन र बिदेशका कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुने गर्छिन् । सुष्मालाई धेरैले से*क्सी ,बोल्ड एव बिन्दास मोडल भनेर चिन्ने गर्दछन् ।नायिका अधिकारीले आफ्नो रंगकर्ममा पहिलो पटक बोल्ड विकीनी अवतार दिएकी हुन् । हेर्दा निकै नै से*क्सी देखिने नायिका अधिकारी हालसम्म बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन कतार, युएई, अष्ट्रेलिया, रसिया, इजरायल, मलेसिया, सिंगापुर, लण्डन र जापान पुगिसकेकी छिन् ।